Albert Heijn Iji Kpochapu Aka Plastic Maka Mkpụrụ na Akwukwo nri
Albert Heijn ekwuputala na ya chọrọ iwepụ akpa rọba maka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri atọka na njedebe nke afọ a. Atụmatụ a ga-ewepu akpa dị nde 130, ma ọ bụ kilogram 243,000, site n'ọrụ ya kwa afọ. Malite na etiti Eprel, ...GỤKWUO »
Fei Fei Na-eme Women'sbọchị Ndị Nwanyi
March 8th, FeiFei haziri ndị ọrụ nwanyị niile ka ha mee emume Women'sbọchị Women'smụ nwanyị Mba Internationalwa ma nwee asọmpi ịlụ ọgụ pụtara ihe. Ndị otu mmeri nwetara onyinye mmesapụ aka na onye ọ bụla sonyere natara onyinye. GỤKWUO »
Ndi otu ndi oru FeiFei na-ahu JTEKT
Post oge: Feb-05-2021
Jenụwarị 28th, Onye isi njikwa Maazị Joe Lai duuru ndị otu njikwa nke ngalaba mmepụta iji gaa leta JTEKT Steering Systems (Xiamen) Co., Ltd maka mgbanwe miri emi na njikwa 6S. Anyị na ndị isi dị mkpa nke JTEKT FeiFei nwere mkparịta ụka miri emi mgbe niile ...GỤKWUO »
Jenụwarị 13, 2021, onye isi njikwa Joe Lai, gara leta ndị uweojii na-ahụ maka ndị uwe ojii Xiamen Xinyang na "onyinye ịhụnanya", ma nyefee ndị nkpuchi 3000 ndị uwe ojii na-ahụ maka okporo ụzọ bụ ndị lekọtara ma kwe nkwa nchekwa na ịdị mma nke ur ...GỤKWUO »
Nchịkọta afọ nke ndị otu ahịa Fei Fei
Na Jenụwarị 8, 2021, nzukọ kwa afọ nke Ngalaba Ahịa nke Xiamen Fei Fei bag Co., Ltd. emere na Grace Hotel. Nzukọ ahụ na-eduzi Miss Yan, onye njikwa ahịa, na ndị otu ngalaba ahịa chịkọtara otu otu. Ndị otu ahịa ahụ bụ ọgbamgba na hu ...GỤKWUO »
Ndị isi ọchịchị obodo anọ gara leta FeiFei
Na Ememe Oge opupu ihe ubi na-abịaru nso, iji rụọ ọrụ dị mma na mgbochi ọrịa na njikwa, na Jenụwarị 7, 2021, iclọ Ọrụ Ahụike Haicang District, Haicang District Emergency Bureau nke ,lọ Ọrụ, Ndị ọrụ nchịkwa mmadụ nke Haicang na ...GỤKWUO »
Okwu: 3F, No.01, Xinguang Road, Xinyang, Haicang, Xiamen, China